Ukuphumelela kwabafundi, ngamanani »IYunivesithi yaseHodges
Ukuphumelela kwabafundi kunye neZalathi zeNtsebenzo yaMaziko
Impumelelo yomfundi ekufezekiseni iinjongo zobuqu okanye zobungcali yeyona njongo iphambili yeYunivesithi yaseHodges. Iyunivesithi ilinganisa impumelelo yomfundi kunye nokusebenza kwamaziko ngeendlela ngeendlela, kubandakanya amazinga omsebenzi / okuqeshwa kwabafundi, imveliso enesidanga, ukugcinwa kwabafundi kunye nokuzingisa, amaqondo okuthweswa izidanga, kunye nenqanaba lamatyala abafundi.
IiRhafu zoGcino lwaBafundi zoNyaka
Inqanaba lokugcinwa konyaka lichazwa njengepesenti yabafundi abafuna isidanga ababhalise kwikota yokuwa ababesabhalise kweli xesha lilandelayo lokuwa. Amaxabiso okugcinwa konyaka abalwa okokuqala ngqa eHodges kunye nabo bonke abafundi ababhalisileyo. Iirhafu zokugcina abafundi be-bachelor zibonelelwe ngezantsi. Ithagethi ebekwe yiYunivesithi yaseHodges iyahluka ngokusekwe kwiqela, kunye ne-40% okokuqala eHodges kunye ne-60% yabo bonke abafundi ababhalisileyo.
Ikota yokuqala eHodges
Bonke abafundi ababhalisileyo
Amaxabiso okuwela ebusika ukuya ekuphumeleleni kwabafundi
Abafundi bahlala bexela ukuba ikota yabo yokuqala kwikholeji yeyona inzima, ngakumbi kwabo babuyela esikolweni emva kokungabikho ixesha elide, abasebenza ngokusisigxina, nabaxhasa iintsapho. IYunivesithi yaseHodges ifikelela kubafundi ngeenkonzo eziyilelwe ukubanceda baphumelele-ngakumbi ngeli xesha lokuqala elibalulekileyo.
Ireyithi yokunyamezelwa kwekota ichazwa njengepesenti yabafundi abafuna isidanga ababhalise kwikota yokuwa ababhalise kwikota elandelayo yasebusika. Amaqondo okuphikelela kwikota abalwa okokuqala ngqa eHodges kunye nabo bonke abafundi ababhalisileyo.
Apha ngezantsi kukho amaqondo okuphikelela kwikota ukuya kwikota kubo bonke abafundi abafuna isidanga; abantu abasebatsha nyani (okokuqala ekholejini); kunye nabafundi abangamagorha, iqela ngalinye lifikelela okanye lidlula kwi-Hodges ye-50% ekujoliswe kuyo okokuqala e-Hodges kunye ne-70% ekujoliswe kuyo kubo bonke abafundi ababhalisileyo. Idatha ibonisa ukuba uninzi lwabafundi luphumelele kwikota yabo yokuqala kwaye baphinde babhalise kwiYunivesithi yaseHodges kwikota yabo yesibini ekholejini.
IXESHA LOKUQALA KWIHODGES COHORT
Abafundi abafuna isiGanga 70% 71% 75% 70% 67% 71% 58% 60% 74%
Nyani Freshmen 71% 74% 77% 61% 66% 72% 53% 51% 70%
BONKE ABAFUNDI ABABHALISIWEYO BAKHUTHAZA
Abafundi abafuna isiGanga 75% 77% 76% 78% 75% 76% 76% 65% * 76%
Abafundi baMagqala 73% 78% 72% 83% 78% 79% 84% 72% * 84%
* QAPHELA: Eli xesha laphazanyiswa ngenxa yokuvalwa kwethutyana kwesikolo ngobhubhane weSARS-COV-2.
Amaxabiso okuBekwa kweJob
Iinkcukacha-manani zangaphandle zisetyenziselwa ukuqinisekisa amanani engqesho angaphakathi. Umthombo wedatha osetyenzisiweyo yiNkqubo yeMfundo noQeqesho lokuFakwa kweFlorida (FETPIP), eqokelela idatha kwiikholeji ezizimeleyo nakwiiyunivesithi zaseFlorida (ICUF). Kolu lwazi lupapashiweyo kutshanje, iYunivesithi yaseHodges iphakame kakhulu xa ithelekiswa neontanga zayo ze-ICUF, apho abafundi baseHodges bahlala bekwindawo yesihlanu kumvuzo ophakathi wonyaka kwizidanga ze-baccalaureate abaqeshwe phakathi ko-2011 no-2019. Ndizuze isidanga se-bachelor kwaye uqeshwe yi-65%.
INANI LABAFUNDI BEBAKALA
Ipesenti yabafundi abafumene izidanga
UMLINGANISELO WEMIVUZO YONYAKA YAMABAKALA ABASETYHINI
ISIKHUNDLA SAKHO PHAKATHI KWABANYE ABANTU
Imveliso yesiDanga kwiMpumelelo yaBafundi
Ngenxa yobunzima benqanaba lokuthweswa isidanga ngokuthelekisa kumaziko ahlukeneyo, inyathelo elinye lokuphendula ngoxanduva lweYunivesithi yaseHodges isebenzisa ukubonisa impumelelo yomfundi yimveliso yesidanga. Imveliso yesidanga kukubonakaliswa kwenani elipheleleyo leedigri ezinikezelwe kunyaka wokufunda njengepesenti yokubhaliswa ngokusisigxina (FTE) njengoko kuchaziwe kwiNkqubo eDityanisiweyo yeDatha yezeMfundo (IPEDS). Ke ngoko, ukuvelisa isidanga kukubonakalisa impumelelo yomfundi ngokubanzi, endaweni yecandelo elincinci leqela leyunivesithi, kwaye kubonelela ngemilinganiselo efanelekileyo yokuphumelela kumaziko amaninzi. Nangona uHodges efumene amanani obhaliso asezantsi kule minyaka idlulileyo, itafile ibonisa impumelelo engaguquguqukiyo kwimveliso yesidanga, ngeedigri ezingama-29 ezinikwe nge-100 FTE kwi-2019-2020, edlula ekujolise kuko ngoku kwiidigri ezingama-25 nge-100 FTE.
(IMISEBENZI NGE-100 FTE)
Iirhafu zokuthweswa izidanga
Iirhafu zokuthweswa izidanga zipapashwa yiNkqubo eDityanisiweyo yeDatha yezeDatha (IPEDS) kurhulumente womanyano. La maxabiso amele ipesenti yabafundi abasisidanga abafuna isidanga ababhalise okokuqala kwikholeji (abasebatsha abasebatsha) abaphumelela ngaphakathi kwe-150% yexesha elilindelweyo lokugqiba idigri yabo.
Iqela labantu elisetyenziselwa ukubala ireyithi yokuthweswa izidanga kwe-IPEDS ayimelanga ngokuchanekileyo abafundi baseHodges, ikakhulu abantu abadala abasebenza kwaye baxhasa usapho; kwaye ke, bahlala befunda isigxina kwaye sele benemali ethile kwikholeji. Ekwindla ngo-2020, umndilili weminyaka yabafundi bakaHodges yayiyi-33 kunye ne-34% yabafundi abafuna isidanga ababefunda ixesha elithile.
Ke ngoko, ukulungiselela ukubonelela ngedatha eqinisekisayo, uHodges ubala amazinga okuthweswa isidanga kwangaphakathi kwiipesenti ezili-150 zexesha eliqhelekileyo lokuthweswa izidanga kwabafundi bezidanga zokuqala kwiqela lababhalayo lokuya abaya eHodges okokuqala. Amanqanaba okuphumelela kwiipesenti ezili-150 okokuqala kwiHodges undergraduate, abafundi abafuna isidanga banikezelwa ngezantsi. (Oku kumele ukuba yinyani kwabadibanisi abasandul 'ukungena kunye nabadluliselayo kwii-cohorts.) Ukongeza, ireyithi yokuthweswa izidanga kwiipesenti ezili-150 ibonakalisiwe kwiqela elidluliselanayo, elimele iipesenti ezingama-70 zexesha lethu lokuqala kwiqela labantu baseHodges. Ngokwahlukileyo, i-IPEDS iyonke inqanaba lokuthweswa isidanga kubonelelwa ukubonisa ixesha elizeleyo, inyani yeqela elitsha njengoko kuchazwe ngokusemthethweni.
Ngokusekwe kwidatha yokuhamba ngokusisiseko ukusuka ekuweni kwe-2007 ukuya kwi-2014, ekujolise kuko kwiYunivesithi yaseHodges yokufumana isidanga sangaphakathi kwiipesenti ezili-150 zexesha eliqhelekileyo lokugqitywa ngama-30%.
IMIRHUMO YOKUFUNDA YANGAPHAKATHI KWI-150%
Isidanga sokuqala-ukuKhangela aBafundi Ukuwa kwe2007 Ukuwa kwe2008 Ukuwa kwe2009 Ukuwa kwe2010 Ukuwa kwe2011 Ukuwa kwe2012 Ukuwa kwe2013 Ukuwa kwe2014
Ixesha lokuqala kwiHodges Cohort 40% 44% 30% 30% 30% 31% 27% 33%
Ukuhanjiswa kweQela 51% 54% 36% 35% 35% 38% 33% 42%
I-IPEDS NGOKUQHELEKILEYO KWI-150%
IiRhafu zokuQeqesha ngokuPheleleyo kwe-IPEDS 30% 29% 30% 25% 27% 22% 26% 28%
Isiphumo somlinganiso we-IPEDS kwimpumelelo yomfundi
Ukumela ngcono iYunivesithi yaseHodges, inyathelo elitsha lesiphumo se-IPEDS lisandula kukhethwa njengesalathiso sokugqitywa kwesitshixo seSACSCOC. Nangona le milinganiselo iqokelelwe kwiminyaka embalwa (kunye neyona idlulileyo ngo-2020-2021 yeqela lika-2012), uhlalutyo olusisiseko lubonisa ukuba, ngokubandakanywa kwabafundi abangena kunye nabangesosigxina, ngokuchanekileyo ibamba abantu abadala abasebenzayo ababuyela esikolweni, ireyithi yokuwongwa yeminyaka esi-8 iyonke iwela kwithagethi yethu emiselweyo engama-30%.
UMGANGATHO WESIPHUMO SE-IPEDS (IRHAFU YOMBUZO YONYAKA-8 YONYAKA)
Isidanga sokuqala-ukuKhangela aBafundi 2007 Iqela 2008 Iqela 2009 Iqela 2010 Iqela 2011 Iqela 2012 Iqela
Ixesha elipheleleyo, Ixesha lokuqala ukungena 30% 29% 29% 23% 26% 26%
Ixesha lexeshana, ukungena okokuqala 35% 22% 24% 34% 35% 27%
Ixesha elipheleleyo, Ukungeniswa kwexesha lokuqala 56% 59% 44% 42% 42% 38%
Ithutyana, Ukungenisa okokuqala 44% 35% 29% 31% 24% 32%
Iziphumo zoMgangatho oPheleleyo weeNkqubo 45.9% 45.6% 35.6% 32.5% 31.8% 30.8%